Isamsung izakususa uluhlu lweGalaxy J | I-Androidsis
Intsapho yeGlass J yenye yezona ndawo zaziwayo nezithengisa kakhulu kwaSamsung. Nangona kubonakala ngathi iintsuku zayo zibaliwe, njengoko inkampani iceba ukukhupha olu luhlu lweefowuni kungekudala. Inkampani isebenza kwisicwangciso esitsha sokuhambisa kwakhona uluhlu lwazo lweefowuni. Isicwangciso esitsha esiza kuqala ngeGalaxy A9 Pro ngo-Okthobha.
Kuya kubakho utshintsho olubalulekileyo kuluhlu lwe-Samsung kunyaka olandelayo. Ngenxa yoku, i Uluhlu lweGalaxy J luya kususwa ngokupheleleyo, enika indlela kuluhlu entsha phones.
Isamsung izakususa uluhlu lweGalaxy J kwaye endaweni yayo kuya kwenziwa usapho olutsha lwezixhobo, oluza kungena kwintengiso phantsi kwegama iGlass M. Ayaziwa okwangoku ukuba loluphi uhlobo lweefowuni esiza kuzifumana kuyo, ngengqondo yoluhlu iya kuba yeyakho.
Lo nto Uluhlu lweGalaxy A kunye neGalaxy M iya kuba yile nxalenye yeendawo eziphakathi kunye nezisezantsi evela kwinkampani yaseKorea. Nangona kulindelwe ukuba amanye amabakala ongezelelweyo nawo aya kufika, ngokutsho kwemithombo yeendaba ethile, eya kuthi ibe yile yeGPS P kunye neGPS R.
Isamsung ifuna ngale ndlela ukugcina isikhundla sayo kwintengiso, ukongeza ekuphuculeni iziphumo zayo kwiimarike eziphambili. Ubukho bayo e-China buye bancipha ngokuhamba kwexesha, kwaye inkampani ifuna ukutshintsha oku. Bajonge ukomeleza ubukho babo e-India, indawo yentengiso ekhulayo apho uphawu luthengisa khona.
Ngaba uya kuba ngaphezulu kweenyanga ezili-12 ezizayo xa sibona olu tshintsho kwi-Samsung. Asikabi nayo imihla yolu tshintsho okanye xa iifowuni zokuqala zoluhlu lutsha ziya kufika. Kude kube ngo-2019 kubonakala ngathi ayizukufika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Isamsung kungekudala izakususa uluhlu lweGalaxy J
I-Twitter iya kubuyela ngokulandelelana ngokulandelelana kwii-tweets zayo